Gbasara Anyị - Shijiazhuang Tefeng Trading Co., Ltd.
Sogba ụdị Mkpụrụ
Ngwunye Wire Mesh
Shijiazhuang Tefeng Trading Co., Ltd. Anyị rapaara n'ụkpụrụ azụmaahịa nke "nkwupụta ndị dị mma site na ngwaahịa na ọrụ dị elu", ma si otú a anyị na-enye ọrụ usoro dum site na nhazi ngwaahịa, ịzụlite, imepụta, ịwụnye na mgbe azụmaahịa maka. ndị ahịa nwere usoro izizi dị elu. Enyerela ụlọ ọrụ anyị aha nke "Credable and Trustable Product & Service Supplier" site n'aka ọtụtụ ndị ọrụ. Anyi na n’iru itolite n’iru ntuzi aka oru mmuta-elu na onodu mmepe di elu ka anyi weta igwe anyi n’ahia ma na mba ofesi. Anyi n’eche n ’anya na mmekorita gi n’otu n’iru ma were obi oma nabata mbia nke gi iji wuo odimma anyi mara mma.
Ka ọ dị ugbu a, ụlọ ọrụ ahụ nwere ngwaahịa azụmaahịa abụọ:
Nke mbu, igwe nkpuru idozi nkpuru.
Ọ kachasị gụnyere: igwe ikuku dị ọcha, ihe ndọtị akpọrọ akpọrọ, ihe ngbanye ụdị ngbanye okwute igwe, igwe mkpuchi, igwe na - ekewapụ na igwe na - akụ ma na - arụ ọrụ ugbo na - arụ ọrụ nwere ule site na ngwa nyocha mba dị elu. Ha nwere ezigbo ahụ ike, arụmọrụ zuru oke na teknụzụ dị elu.
Nke abuo, igwe eji eme ihe n ’ikuku.
Kpamkpam nwere ahịrị mbube mpe mpe akwa 3D, igwe ịgbado ọkụ nzere, CNC nzere ihe eji arụ ọrụ, igwe mpịakọta mpịakọta 3D (bevel inserting machine), ihe ịgbado ọkụ nke igwe mpe mpe mpe akwa, igwe ihe eji eme ihe nke igwe mgbo, nzere ígwè. akụrụngwa ịgbado ọkụ, igwe nzere hexagonal, igwe gbasaara, igwe igwe agịga akụrụngwa, igwe mesh Diamond, igwe na-ahụ maka ịgbado ọkụ na ịgbatị & ịkpụ.
Anyị kwenyere na ezigbo ịdị mma na ọrụ kachasị mma bụ ndụ anyị. Anyị ji obi anyị niile nabata ndị enyi anyị niile kpọtụrụ anyị! Ọmarịcha ọdịnihu dị ebe ahụ. Ka anyi mee ya!